Madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho ku tegaya Dalka Ereteria. – Nabad & Nolol
Madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho ku tegaya Dalka Ereteria.
Wasiirka warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Mudane; Daahir Maxamuud Geelle, ayaa sheegay in Madaxweynaha JFS uu Berri booqasho Taariikhi ah ku tegi doono Magaalada Asmara ee caasimadda Dalka Eretrea.
Mudane; Geelle oo la hadlay war-baahinta Qaranka ayaa intaa raaciyay in Soomaliya iyo Eretria ay sameynayaan xiriir Diblumaasiyadeed oo cusub, isagoo Madaxweyne Madaxamed C/laahi Farmaajo halkaasi kulan kula qaadan doono dhiggiisa Eretrea Isaias Afwerki.